माधव नेपलीले भने : मैसँग यत्रो रिसइबी साध्‍ने स्थिति कसरी आयो होला ? -
Home›देश›माधव नेपलीले भने : मैसँग यत्रो रिसइबी साध्‍ने स्थिति कसरी आयो होला ?
माधव नेपलीले भने : मैसँग यत्रो रिसइबी साध्‍ने स्थिति कसरी आयो होला ?
अर्को पार्टी बनाउने हो भने सांसदहरुको पद नरहन सक्छ । सर्वाेच्च अदालतले पूर्व एमाले र पूर्व माओवादीको कित्ता छुट्याइदिएपछि माधवकुमार नेपाल र उनको समूहमा रहेका ४० जना सांसद सबैभन्दा अप्ठ्यारोमा परेका छन् । उनीहरूलाई ओलीसँग मिलेर जान राजनीतिक र छुट्टिएर अघि बढ्न कानुनी तथा प्राविधिक कठिनाइ छ । कान्तिपुरका लागि बिनु सुवेदीले गरेको संवादमा नेपालले के गर्ने भन्नेबारेमा अहिलेसम्म सोचिनसकेको बताए तर अदालतको फैसलाले आफूलाई सबैभन्दा अप्ठ्यारोमा पारेको उनले प्रतिक्रिया दिए । नेपालसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश :
अदालतले फैसला नै गरिसकेपछि अब त्यसलाई मान्नुपर्छ होला नि त ।
धुम्बाराहीमा एमालेको बोर्ड राखियो , नेकपाको ...
वाजपेयीको अन्त्येष्टिमा परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवाली सहभागी हुने
अर्थदेशबजारबैँक / वित्तमुख्य खबर
एनआईसी एशिया बैंकले खोल्यो थप पाँच शाखा
ललितपुर महानगरद्वारा पाँच करोडको राहत कोष स्थापना
महोत्तरीबाट हराएका घाँस काट्न गएका सात बालिका तथा किशोरी भारतमा भेटियो
चितवनमा बस र ट्रक ठोक्किँदा १ को मृत्यु, २५ जना घाइते
किन ढुंगानालाई नै किन नेविसंघ अध्यक्ष बनाउन चाहन्छन् देउवा ?
स्याफ्रुबेसी–रसुवागढी सडक बनाउन चिनियाँ टोली साइटमा